महरालाई कारागारमा भेट्ने डा. बाबुराम भट्टराई पहिलो उच्चतहको नेता – Nepal Japan
महरालाई कारागारमा भेट्ने डा. बाबुराम भट्टराई पहिलो उच्चतहको नेता
नेपाल जापान २० माघ २१:५६
संसद सचिवालयको स्वास्थ्य इकाईमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि जवर्जस्ती करणीको आरोपमा डिल्लीबजार कारागारमा रहनुभएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भेटनुभएको छ ।
कारागार चलान भएपछि महरालाई भेट्ने उनी पहिलो उच्च तहको राजनीतिज्ञ भएको कारागार सूत्रले बतायो ।
आफूमाथि जवर्जस्ती गर्न खोजेको किटानी जाहेरीपछि उमहरालाई १९ असोजमा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।
सोमबार कारागार पुग्नुभएका डा भट्टराईले महरासंग करिब एक घन्टा कुराकानी गरेको कारागारका एक कर्मचारीले बताएका छन् । महरालाई १८ कात्तिकमा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत, काठमाडौंले आदेश दिएको थियो ।
आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत पनि पुगे । उच्चले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरिदिए पनि महराको मुद्दा एक महिनाभित्र किनारा लगाउन उच्च अदातलते भनेको थियो ।